Caafimaadka Habdhaqanka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Caafimaadka Dabeecadda
Raadi ilo si aad u daryeesho caafimaadka xubinta oo dhan.
Faa'iidada Medicare ee CHPW iyo bixiyeyaashayada ayaa mas'uul ka ah ilaalinta xubnaha si wanaagsan, jir iyo maskaxba. Waxaan daryeel u siineynaa xubnaheena guud ahaan joogtada ah ee adeegyada caafimaadka jirka iyo dhaqanka.
Mas'uuliyadahaaga Bixiye ahaan
Adiga oo ah bixiye daryeel caafimaad aasaasi ah, adiga ayaa mas'uul ka ah isku dubaridka bixiyaha caafimaadka hab dhaqanka bukaankaaga. Haddii aad u baahan tahay caawimaad inaad u hesho bixiye caafimaad oo habboon oo ku habboon bukaankaaga, fadlan wac CHPW, ama ku hagaaji bukaan-socodkaaga inuu ku hadlo magacooda. Uma baahnid gudbin si loo arko bixiyaha caafimaadka dhimirka.
Adiga oo ah Bixiye Caafimaad Caafimaad Dabeecad ah, adiga ayaa mas'uul ka ah sameynta qiimeyn bilow ah oo loogu talagalay bukaanada markii ugu horeysay si loo qiimeeyo heerka baahidooda. Waxaad la jaanqaadi doontaa bixiyaha daryeelka aasaasiga ah ee bukaankaaga si aad u abuurto qorshe daryeel habboon.
Haddii aad tahay Bixiyaha Caafimaadka Habdhaqanka, waxaad mas'uul ka tahay inaad sameyso qiimeyn bilow ah si loo go'aamiyo baahiyaha daaweynta. Sidoo kale waa inaad hubisaa ballamaha dabagalka ee bixiyaha caafimaadka hab dhaqanka ku habboon.
CHPW waxay hubin doontaa helitaanka daryeelka
Bixiyeyaasha raadinaya daaweynta caafimaadka dhimirka ee bukaanadooda CHPW ayaan mar dambe ku cuslaanin sameynta wicitaano badan. CHPW waxay leedahay hannaan Adeeg Macaamiil oo cusub si ay ula wareegto mas'uuliyadda hubinta helitaanka bixiyeyaasha caafimaadka maskaxda ee habboon xubnaha. Si fudud, xubnaha faro inay wacaan adeegga macaamiisha haddii ay caawimaad uga baahan yihiin helitaanka bixiye caafimaadka maskaxda ah. Shaqaalaha maareynta daryeelka ee tilmaami doona bixiyeyaasha laga heli karo aagga iyo ballan u yeelan doona bukaankaaga.
Nidaamka cusub ee loo yaqaan 'CHPW' waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo caqabadaha soo food saara xubnaha raadinaya bixiyaha caafimaadka maskaxda. Maaddaama bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah ay inta badan bukaanleyda ka caawiyaan inay helaan adeegyo gaar ah, oo ay ku jiraan caafimaadka habdhaqanka, waxaan rabnaa inaan u sheegno bixiyeyaasha inay ka ogaadaan nidaamka cusub ee xubnuhu ugu yeeraan adeegga macaamiisha Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington.
Maareynta Daryeelka Xanuunka Badan (MCCM)
MCCM waxaa loo heli karaa xubnaha khatarta sare leh ee leh xaalado badan oo dabadheeraad ah oo ay uga sii darayaan isku-buuqsanaanta habdhaqanka iyo caqabadaha nafsiga ah MCCM waxay diiradda saareysaa wax ka qabashada wadayaasha jir ahaaneed, nafsi ahaaneed, iyo bulsheed ee dhaqan xumada. Tani waxay ka caawineysaa xubnaha inay kordhiyaan dhiirigelinta, u hoggaansamaan daaweynta, iyo inay gaaraan himilooyinkooda caafimaad ee gaarka ah. La xiriir kooxda Maaraynta Daryeelka wixii macluumaad dheeraad ah ama tixraac xubin.
Adeegyada oo Kooban
Cilladaha Maskaxda & Isticmaalka Maandooriyaha
Bukaanka Bukaanka Maskaxda ee Xanuunka daran
Qiimeyn & Daaweyn
Xasilinta Qalalaasaha ee degenaanshaha
Baxnaaninta bukaan-socodka Isticmaalka Maandooriyaha iyo xarunta daaweynta guryaha
Xarunta daaweynta bukaan-jiifka maskaxda
Adeeg kasta oo xarun ku saleysan oo bixiya 24 saacadood / maalintii iyo 7 maalmood usbuucii adeegyada
Barnaamijyada Bukaanka Baaxada Leh
Barnaamijka Bukaan-socodka degdegga ah (IOP)
Adeegyada Taageerada Bulshada
Adeegyada Soo kabashada SUD
Maareynta Kiiska nafsaani-bulsho / adeegyada kale ee Maareynta Kiiska
Dhaqancelinta nafsaaniga ah
Tijaabinta cilmu-nafsiga iyo cilmu-nafsiga
Tijaabinta cilmu-nafsiga iyo cilmu-nafsiga waxay u baahan tahay oggolaansho hore iyo ogeysiin.
Soo dejiso foomka dalabka kahor intaadan daaweyn daaweynta
Soodejinta Transcranial Magnetic Stulation
Halkan guji si aad u aragto lambarrada lacag-bixinta iyo qoraallada adeegyada horay loo oggolaaday
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Nofeembar 17, 2020